ဆိုတဲ.“ အင်တာနက်ပေါ်ကသတင်းမီဒီယာတစ်ခု Searchina ရဲ. “ ဒီနေ.အတွက်ဘလေ့ာ”
ဆိုတဲ. စာမျက်နှာ ကနေဘာသာပြန်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
“ ဂျပန်နိုင်ငံကို လာလည်သွားတဲ. တရုပ်လူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ. သဘောထားအမြင် ”
ယနေ.တရုပ်ပြည် ရဲ. စီးပွါးရေး တဟုန်ထိုးတိုးတက်နေပါတယ်။ ပီကင်း၊ ရှန်ဟိုင်း၊ တို.လိုမြို.တွေရဲ. တိုးတက်မှုဟာဆိုရင် ဂျပန်နဲ.သိပ်မကွာခြားလှပါဘူး၊ တရုပ်ပြည်မှာ ဘာပစ္စည်းမဆိုရနိုင်ပါတယ်။ ဒီဘလော့　မှဖေါ်ပြထားတာ ကတော့ ကြောက်ခမန်းလိလိတိုးတက်နေတဲ. ရှန်ဟိုင်းမြို.ကနေ ဂျပန်နိုင်ငံကို လာရောက်လည်ပတ်တဲ့ အဖွဲ.တစ်ဖွဲ.နဲ. လိုက်ပါခဲ့ဘူးတဲ. တရုပ်လူမျိုးတစ်ယောက်က ဂျပန်ကနေ တရုပ်ပြည်ပြန် ရောက်သွားပြီး သူ.ဘလော့ဂ်မှာ ရေးထားတဲ. သူ.ရဲ. ဂျပန်နိုင်ငံအပေါ်သဘောထား အမြင်ပါ။ အဲဒါကတော့၊ ဂျပန်နိုင်ငံ နဲ. တရုပ်နိုင်ငံ တို.ရဲ့ အကြီးမားဆုံး ကွာဟချက်တစ်ခုပါ။ သူ.ဘလော့မှာ ရေးထားတာကတော့။
၂၀၀၈ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ လေ.လာရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ.တစ်ဖွဲ.နဲ. ဂျပန်ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်ကိုရောက်တာနဲ. ဂျပန်နိုင်ငံရဲ. နှစ်နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးအစီအစဉ်တွေကို ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပြီး၊ အလည်အပတ်နေရာမျိုးစုံကိုလည်း သွားရောက်ခဲ့ရင်းနဲ. စဉ်းစားမိတာတစ်ခုကတော့။ ဂျပန်နဲ. တရုပ်ဟာ
အပြင်ပန်း ယေဘူယျအနေနဲ. ကတော့ တူတယ်ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီ့အပြင် တိုကျိုကလွဲလို. တခြားဘယ်မြို.ကြီးတွေမှ ဒီလောက်တိုးတက်တာမတွေ.ရပါဘူး။ စူပါမားကတ်တွေ၊ ကွန်ဗီနိယန်.စတိုးတွေဆိုတာ ကလည်း တရုပ်ပြည်နဲ. က သူလိုကိုယ်လိုပါပါ။ မြေအောက်ရထားလမ်းတွေများဆို တရုပ်ပြည်ကတောင်ပိုပြီး ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းရှိသေး။ ဒီလိုကြေးဆို ယခုလက်ရှိရှန်ဟိုင်းကမှ တိုးတက်တယ်လို. ဆိုရဦးမယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော်က ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် ဘ၀င်မြင့်မိလိုက်သေးတယ်။
ဒါပေမယ့်လို.၊ ဒါပေမယ့်လို. ပြောချင်တာက ဂျပန်နိုင်ငံကို သေချာလေ့လာလေ၊ မြင်အောင်ကြည့်လေ ကျွန်တော့အတွက်ကတော့ (ကျွန်တော့်နိုင်ငံအတွက်) ပိုပြီး ရင်လေးလာရလောက်အောင်ပါပဲ။ စဉ်းစားလေ ပိုသဘောပေါက်လေ ဖြစ်ရတာကတော့ တရုပ်လူမျိုးနဲ. ဂျပန်လူမျိုးက အတော့်ကို ကွာခြားပါတယ်။ ကွာခြားမှုက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်မဟုတ်ပါဘူး။ လူမျိုးရဲ. စရိုက်လက္ခဏာ အရကော၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံကော၊ အကွာကြီး ကွာပါတယ်။
တစ်အချက်ကတော့၊ လူအများနဲ.ဆိုင်တဲ့ အကျင့် စာရိတ္တပါ၊ ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော အကျင့်သိက္ခာကို အင်မတန်အလေးထားတာကိုတွေ.ရပါတယ်။ ဂျပန်မှာနေခဲ့ရတဲ့ အချိန်လေးက သိပ်တိုတောင်းပေမယ့် ဂျပန်ဘက်ကပြင်ဆင်ထားတဲ. ခရီးစဉ်က အကွက်စေ့ပါတယ်။ အိုကီနာဝါ နဲ. ဟိုကိုင်းဒိုးကလွဲပြီး မြို.ကြီးတော်တော်များများကို နှံ.ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်သိလိုက်ရတာက သူတို.ဂျပန်လူမျိုးတွေက တော်တော် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိပြီး၊ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဥပမာ၊ လမ်းမှာ လမ်းမသိလိုမေးရင် ယောက်ကျားမိန်းမ၊ ကြီးသည်ငယ်သည်မခွဲခြားလူတိုင်းကို သေချာလမ်းပြပြောပြပေးကြတယ်။ တစိမ်းဆန်တဲ. အကြည့်နဲ့ကြည့် တာမျိုးလုံးဝမတွေ.ခဲ့ရဘူး။
နှစ်အချက်ကတော့၊ အလုပ်နဲ.ပါတ်သက်တဲ့ ခံယူချက်လည်း တော်တော်ကွာခြားတယ်လို.ထင်ပါတယ်။ ဂျပန်ရောက်နေတုန်း ကျွန်တော် မကြာခဏတွေ.ခဲ့ရတာကတော့၊ ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာအလုပ်ကို အရမ်းကြိုးစားတယ်ဆိုတာပါပဲ။ လူတစ်ယောက်နှစ်ယောက်။ အနည်းစုလောက်ကပဲ အသည်းအသန်ကြိုးစားနေတာကို ပြေတာမဟုတ်ဘူးနော်၊ အဖွဲ.အစည်း အစုအဝေးလိုက်က ပူးပေါင်းကြိုးစား လုပ်ကိုင်တတ်ကြတယ်ဆိုပါ၊ အခုလို သူတို. အုံနဲ.ကျင်းနဲ.လုပ်ကိုင် ကြိုးစားမှုဆိုတာ သမိုင်းတစ်ချို. ရှိခဲ့တဲ.အတွက်ကြောင့်များလား။
အထက်ကပြောတာတွေဟာ ခရီးတိုတစ်ခုအတွင်းမှာမြင်ခဲ.သိခဲ့ရတာတွေမို.လို. အားလုံးမှန်တယ်လို. မဆိုနိုင်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို.တရုပ်ပြည်ရဲ. အနှစ်၃၀နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်တဲ. လွတ်လပ်တဲ. ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ရဲ. ရလဒ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့၊ ရုပ်ဝတ္တုအရကတော့ ဂျပန်လောက်နီးနီးတိုးတက်နေပါပြီ။ ဂျပန်ကို
ကျော်တက်ဘို. ဆိုရင်လည်း ဒီလောက် မခက်ခဲတော့ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံယူချက်အနေနဲ.ကတော့ ကြီးမားတဲ. ကွာဟမှုကြီး ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲဒီ ကွာဟမှု ဟာ သေးသေးလေးပါလို. ဘယ်လိုမှ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။
ကျွန်တော်အခုလိုရေးတာဟာ ဂျပန်နိုင်ငံကို မြှောက်ပင့်ရေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်လို ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင်တစ်ဦး အနေနဲ. တရုပ်နိုင်ငံရဲ.ထူးခြားမွန်မြတ်တဲ. လူ.ဘောင်လောကကို ဖန်တီးတဲ.နေရာမှာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကတတ်စွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလေးလေးနက်နက် ယုံကြည်သလို၊ ကျွန်တော်တို.ချစ်တဲ.နိုင်ငံတော်ကြီးကိုရုပ်ဝတ္တုများနဲ. အကောင်အထည်ဖေါ်ဘို.ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်
အဓိပ္ပါယ်မရှိကြောင်း သဘောပေါက်လိုက်ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို.ရဲ. လူမျိုးစရိုက် စာရိတ္တကျင့်ဝတ်တွေကို ပြန်လည်စဉ်းစားပြီး စိတ်ဓါတ်ရေးရာအရကော နိုင်ငံရေးအရပါ ခေတ်မှီအောင်လုပ်ဘို.လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို.ရဲ. ကြိုးစားမှု လိုသေးတယ်လို.ပြောရင်မမှားဘူးလို.ထင်ပါတယ်။
မူရင်းဆောင်းပါးရှိရာ နေရာရဲ့လိပ်စာကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Monday, August 24, 2009